Fiaraha-mitantana ny Nosy Eparsa Fa inona marina moa ilay fifanarahana ?
Araka ny fanambaran’ny firenena mikambana tamin’ny taona 1979, hoy ny mpahay lalàna iraisam-pirenena, Arlette Ramaroson, sady mpitarika ny fikambanana nosy Malagasy dia hoe an’ny Malagasy ireo nosy manodidina antsika na ireo nosy eparsa ireo ary izy ireo no efa niteny
hoe raiso ny taninareo. Tsy anjarantsika no mitonantonana any Frantsa hangataka fiaraha-mitantana fa havendranana izany, hoy hatrany izy. Ho an’ny sekretera jeneralin’ny antoko vahoaka Miray na VAMI, Gaby Vakiniadiana, kosa dia tsy nisy nataon’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, tany Frantsa farany teo ankoatry ny nanao tatitra na “rapport” tamin’ny frantsay reny malala. Satria vita ny fifidianana dia mila taterina any hoe nahazo toerana miisa 80 izahay, hoy izy, na dia tsy mbola namoaka izany aza ny HCC sy CENI. Izany resaka nosy eparsa iaraha-mitantana izany kosa dia tsy misy maha samy hafa azy amin’ny efa nisy teo aloha satria tsy fantatra akory ny anjarantsika ao anatiny. Antsika koa ny tany no nambaran’ny firenena mikambana, hoy hatrany izy, fa tsy hitambarana. Famadihan-tanindrazana moa no andraisanay antoko Teza iny fifanarahan’ny filoham-pirenena tamin’ny frantsay iny, hoy ny filohany, Jean Louis Rakotoamboa.